Adjust character siz - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: adjust character size to new width : (Inglés - Birmano)
_Move to New Window
_M ဝင်းဒိုးအသစ်သို့ ရွှေ့ပါ
Move to New Tab _Group
ဘုရားမဟုတ်သော နတ်ဆိုး၊ မသိဘူးသော ဘုရား၊ ဘိုးဘေးတို့ မကြောက်ဘူးသော ဘုရားသစ်တို့ အား ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
Following the progression of the outbreak to new hotspot countries, people from Italy, the first country in Europe to experienceaserious outbreak of COVID-19, could also be subjected to suspicion and xenophobia.Citizens in countries including Malaysia, New Zealand, Singapore, and South Korea initially signed petitions lobbying to ban Chinese people from entering their countries in an effort to stop the disease.
ယခင်က ကူးစက်မခံရသေးသည့် နိုင်ငံသစ်များသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တိုးတက် ဖြစ်ပွားလာပြီးသည့်နောက် ဥရောပအတွင်း COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် အီတလီနိုင်ငံမှ လူများအပေါ် သံသယဖြစ်မှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မလေးရှား၊ နယူးဇီလန်၊ စင်ကာပူနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံသားများက ၎င်းတို့နိုင်ငံများအတွင်းသို့ ရောဂါဝင်ရောက်မှုအား ရပ်တန့်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသားများအား ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ရန်အတွက် ကနဦး လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
tem namo (Portugués>Inglés)likhang isip (Tagalo>Inglés)panama (Alemán>Griego)peliando (Español>Inglés)巨型帧（jumbo frames） (Chino (Simplificado)>Inglés)malheur (Francés>Dhivehi)habitatis (Latín>Inglés)e mihi neietau nei (Maorí>Inglés)l?eternel est mon berger (Francés>Inglés)meri zindagi ke sabse ache din (Hindi>Inglés)conservatorismo (Italiano>Finés)murri�� (Español>Chino (Simplificado))sunteti pocaiti (Rumano>Alemán)aman pustak padta hai (Hindi>Inglés)muziekvideo (Neerlandés>Francés)herbes de provence: sarriette (Francés>Árabe)you are always in my thoughts (Inglés>Tagalo)mama mimi ni mtoto wako wa ngapi (Suajili>Inglés)aap uske kya lagte ho? (Hindi>Inglés)kukuona (Suajili>Maorí)hai (Inglés>Japonés)nitumie picha nzuri (Suajili>Inglés)cant (Inglés>Búlgaro)hulaan mo pa (Tagalo>Inglés)cuidate (Español>Portugués)